Na-airing CPAP FDA mma? - Azịza Kacha Mma
Isi > Azịza Kacha Mma > Ikuku mgbanaka imi - ihe ngwọta
Ikuku mgbanaka imi - ihe ngwọta
Na-airing CPAP FDA mma?
Ikukubụ ụlọ ọrụ na-akpata nke mbụmicro-CPAPngwaọrụ. Reportedlylọ ọrụ ahụ malitere ịwelite ego maka ego, mana enwebeghị ike inwetaNkwado FDA. Otú ọ dị, dị kaNkwadowebsite, ụlọ ọrụ ahụ kwenyere na usoro a ga-abbreviated n'ihi na ngwaọrụ adịghị “nye ọgwụgwọ ọhụrụ.”Mar 24 2020
Ndị na-esonụ bụ ozi si United States. Nchịkwa nri na ọgwụ ọjọọ. Ka ndị agadi na ndị nwere nsogbu ahụike na-adịghị ala ala amụbawo, ogige nlekọta ahụike ụlọ amụbaala nke ọma na United States.
Ndewo, a bụ m Rick Foucheux, na-ekwuchitere Ngalaba Nchịkwa nri na ọgwụ. Ọnụ ọgụgụ nke ndị ọrịa na-arịwanye elu na teknụzụ ọgwụ iji kwado ma ọ bụ meziwanye ndụ ha ka ha wee nwee ike ibi onwe ha dịka o kwere mee. Agbanyeghị, ọ nwere ike isiri ha ike ijikwa na ijikwa akụrụngwa ha yana ịghọta ntuziaka maka iji ha.
Ihe ndị a, yana iji ngwaọrụ na gburugburu ebe dị iche iche - n'ụlọ, ọrụ, mgbe ị na-eme njem, n'ogige, wdg - nwere ike imebi nchekwa onye ọrịa. Ndị a bụ ụfọdụ ndụmọdụ na-enye aka maka onye ọ bụla na-eji ma ọ bụ na-elekọta aCPAP.
Igwe CPAP, ma ọ bụ igwe nrụgide ikuku na-aga n'ihu na-aga n'ihu, bụ ngwaọrụ a na-ejikarị eme ihe nke nwere ike bụrụ nsogbu mgbe niile iji, hichaa, ma debe ya. A na-eji ya maka ndị nwere nsogbu iku ume, nke a na-eme n'abalị, nke akpọrọ 'apnea ụra na-egbochi'. Ọ na - eme mgbe anụ ahụ dị nro dị n'azụ akpịrị dara ma gbochie gị iku ume.
Ọdịdị nke ihe nkpuchi ihu gị nwere ike imetụta ogo ọgwụgwọ gị. Ọ bụrụ na nkpuchi ahụ siri ike, ị nwere ike ịnweta ọnya n'ọnụ na imi gị. Ọ bụrụ na nkpuchi ahụ tọpụrụ, ikuku nwere ike ịgbapụ ma ụra gị nwere ike ghara ịchegbu, yabụ ọ bụrụ na ị nwere nsogbu na nkpuchi nke siri ike ma ọ bụ tọghee oke, gbalịa eriri Ọ bụrụ na ị na-atụ ụjọ iyi mkpuchi maka ọgwụgwọ, gakwuru dọkịta gị.
Ha nwere ike ịkwado ọzụzụ ọzọ a na-ahụ maka nlekọta ma ọ bụ mgbanwe maka nha ma ọ bụ ihe nlereanya nke ngwaọrụ gị. Etinyela eriri nkpuchi ihu nke ọma na ihu gị ma ọ bụ jiri teepu iji chebe ihe nkpuchi na ihu gị. itinye ihu.
Ma n'ezie, dobe ihe nkpuchi gị! Ọ dabara nke ọma mgbe ọ dị. Hichaa ime ụlọ ahụ dị ka nje nwere ike itolite na ya. Ma dochie tubing gị n'etiti ojiji ka nsị ọ bụla na-ewuli elu, drains steam na tubing nwere ike ịkpọ nkụ nke ọma.
Iji ihe nhicha nke nwere conditioner ma ọ bụ moisturizer hichaa ihe nkpuchi ihu gị nwere ike ịhapụ ihe fọdụrụ. Yabụ, soro ndụmọdụ nke onye nrụpụta gị na akara ngosi ma ọ bụ ngwugwu ngwugwu maka nlekọta na nchekwa nke ngwaọrụ gị kwa ụbọchị. Ekwesiri ikpocha ihe nzacha ụfụfụ nwere ike ịsachasị ozigbo ị chọpụtara na achala acha.
Ihe nzacha nwere ike ịdị mkpa ka a kpochaa ma ọ bụ dochie ya ugboro ugboro, ọbụlagodi kwa izu, ma ọ bụrụ na ị nwere ọtụtụ ntutu anụ ụlọ, uzuzu, anwụrụ ọkụ, ma ọ bụ mmiri n'ime ụlọ gị, yabụ soro ndụmọdụ nke onye nrụpụta gị maka dochie ihe nzacha mkpofu. Ma n'ezie, ụmụaka ekwesịghị iji CPAP gị gwurie egwu! Ha nwere ike ịmegbu ya, gbanwee ntọala ma ọ bụ mee ka ngwaọrụ ahụ bụrụ ihe ruru unyi - ihe ndị a niile nwere ike ibute nsogbu ma ọ bụ ngwaọrụ gị. Ọ dị mkpa ịkọwara nwa ọ bụla na ngwaọrụ a abụghị ihe egwuregwu.
Ugbu a ka etinyere CPAP ka ọ gbanye ikuku ikuku n’ahụ gị. A maara nke a dị ka nrụgide nke nrụgide. Agbalịla ịgbanwe nrụgide nke CPAP gị na-enyefe.
Ọ bụ onye nlekọta ahụike gị nyere nrụgide a aka ma ọ metụtara ọgwụgwọ gị. Ọ bụrụ na ịchọrọ na nrụgide ahụ pere ezigbo mpe ma ọ bụ karịa, gwa dọkịta gị ka ị kpaa nkata mgbanwe ọ bụla na nrụgide edepụtara. Ma, ọ bụrụ na nsogbu iku ume gị na-adịgide ma ọ bụ na-akawanye njọ, kpọtụrụ dọkịta gị ASAP - mana Kwụsị iji CPAP gị ruo mgbe ị gwara dọkịta gị.
Ọ dị mkpa ịmara otu esi arụ ma debe igwe CPAP gị. Ozi ndị a gbasara igwe gị dị: Aha ziri ezi nke akụrụngwa gị aha onye rụpụtara igwe gị Kpọtụrụ ozi maka onye na-ahụ maka ahụike gị ma ọ bụ onye na-ekesa igwe na sistemụ nkwado ngwa ngwa (ike ọkụ, ọdịda batrị ma ọ bụ ọghọm. nwere nsogbu ọ bụla nye dọkịta gị, onye nrụpụta, yana Nchịkwa nri na ọgwụ ọjọọ.
Nwere ike ịkpọ usoro mmemme Medwatch nke FDA na 1-800-FDA-1088. FDA na-enweta akụkọ banyere nsogbu ngwaọrụ ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa Mee ihe You nwere ike ịkọ akụkọ n'ịntanetị site na ịmecha ụdị ndị na-azụ ahịa na www.fda.gov/medwatch ma ọ bụ site na weebụsaịtị ngwa ngwa ụlọ na www.fda.gov/homeusedevices Daalụ.
Ime snoring mkpachị-arụ ọrụ?
Igwuimi mkpachịnaikwo ụra imi mkpachịabụghị otu. Ewezuga ime gịikwo ụra, iku ume n'ọnụ mgbe ị na-ehi ụra nwekwara ike ime ka gị na akpịrị na-akpọ gị teta. Kasị ezi mgbochi-ikwo ụrangwaọrụ-enyere gị aka iku ume site naimikama n'ọnu.Obere vidiyomakaikwo ụrat'unu tụkwa iya imiko.25 nke 2020bọchị 2020
Mgbe ị na-enwe nsogbu nsogbu iku ume n’oge ihi ụra, ume iku ume gị na-akwụsị ruo nwa oge mgbe ị na-ehi ụra. Breathe na-eku ume. Mmetụta na-adịghị mma na-adọta anụ ahụ dị nro n'ọnụ gị na akpịrị.
Mkpụrụ akwara dị na akpịrị gị na-azaghachi site na ịdọpụ anụ ahụ dị nro azụ, na-eme ka ikuku gị meghee Mgbe ị na-ehi ụra, ọ bụ ihe kwesịrị ekwesị ka uru ahụ dị n'ọnụ gị na akpịrị gị zuru ike ntakịrị, mana ezughi igbochi ikuku gị. Apneanwe iku ume mgbe ọ na-ehi ụra nwere ike ime ka ọnụ na akpịrị gị ghara izu ike nke ukwuu. Ire gị na-ada n’elu anụ ahụ dị nro n’elu ụlọ ọnụ gị na-asọba ya na akpịrị.
Nke a na - egbochi ikuku ikuku n’ime ngụgụ gị. Enweghị oxygen na akpa ume gị na-akpọte gị iji kuo ikuku maka ikuku iji weghachi ikuku. Laghachị ihi ụra Usoro okpo iku ume na iteta n'ụra nwere ike ime ọtụtụ oge n'abalị.
Ihe ihi ụra na-ezu ike na-eme ka ọ ghara igbochi apnea na-agwụ ike, isi ọwụwa ụtụtụ, ụra ụra ụbọchị, ike ọgwụgwụ, mgbakasị, na ịta ahụhụ dara ogbenye B Usoro ọgwụgwọ a na-ahụkarị ma dị mma maka ụra ụra na-egbochi bụ nsogbu ikuku na-aga n'ihu ma ọ bụ igwe CPAP. Ngwaọrụ a na-ebufe ikuku site na tube n'ime nkpuchi nke na-adaba n'imi gị ma ọ bụ imi na ọnụ gị, ikuku ikuku dị nro sitere na igwe CPAP na-enyere aka ime ka ikuku gị meghee ma nye gị miri emi iji mee ka ụra zuru ike
Ime imi na-arụ ọrụ?
Imu imi gị na-adịkarị warara mgbe ị na-eche ụja. Ndị aventsmee ka imi gị mepere, na-ekwe ka ikuku na-enweghị nsogbu gafere na gịimi, na-ewepụ snoring. Eeh, echiche iyi ihe n’oghere imi gị abụọ n’abalị niile bụ ihe ịtụ ụjọ, mana dị ka ọtụtụ ndị na-enyocha ya si kwuo, ndị aimi ventsn'ezierụọ ọrụ.Ọgọst 28 2020
Na narị afọ nke 16, dọkịta Flemish Andreas Vesalius kọwara otu esi echekwa anụmanụ na-eri ume site na ịtinye ọkpọkọ n'ime ikuku ikuku na ikuku ikuku iji mee ka akpa ume ya dị na nkọwa mbụ nke ikuku ventilation - omume dị oke mkpa n'oge a ọgwụ. Iji ghọta uru ventilashị bara, ọ dị anyị mkpa ịghọta otú usoro iku ume si arụ ọrụ. Anyị na-eku ume site na ibute diaphragms anyị, nke na-eme ka oghere obi anyị sakwuo mbara.
Nke a na - eme ka ikuku nwee ike ịmịnye ma kpoo alveoli - ọtụtụ nde obere egosipụta na akpa ume anyị. Ndi okpokoro obara nwere juputara na obere balloon ndị a. Obara a na - amịkọrọ oxygen sitere na alveoli agbasiri ike, na - ahapụ ikuku carbon dioxide.
Mgbe diaphragm ahụ dị jụụ, a na-ekpochapụ CO2 yana ngwakọta oxygen na gas ndị ọzọ. Mgbe usoro iku ume anyị na-arụ ọrụ nke ọma, usoro a na-eme na akpaghị aka. Enwere ike imebi sistemụ site n'ọtụtụ ọnọdụ.
Ikwo ụra na-egbochi mọzụlụ diaphragm ibute. Asthma nwere ike iduga ikuku na-ekpo ọkụ nke na-egbochi ikuku oxygen. Na oyi baa, nke na-ebutekarị nje na-efe efe ma ọ bụ nje virus na-ebute alveoli n'onwe ha.
Ndị na-efe efe na-egbu mkpụrụ ndụ ngụgụ, nke na-ebute nzaghachị nke nwere ike ibute ọnya na-egbu egbu na njigide mmiri. Ọnọdụ ndị a niile na-eme ka ngụgụ ghara ịrụ ọrụ nke ọma. Mana ndị na-arụ ọrụ ikuku ventilat na-achịkwa usoro ahụ ma weta oxygen n'ime ahụ mgbe usoro iku ume na-enweghị ike.
Igwe ndị a nwere ike ịgafe ụzọ ikuku dị warara ma nyefee ikuku oxygen dị elu iji nyere aka akpa ume mebiri emebi ịgbasa ikuku oxygen. Ventilators nwere ike ịrụ ọrụ n'ụzọ abụọ dị mkpa: iji ikuku ikuku dị mma iji kpoo ikuku n'ime ngụgụ onye ọrịa ahụ, ma ọ bụ iji ventilashị nrụgide na-adịghị mma iji dọta ikuku. Ná ngwụsị nke narị afọ nke 19, usoro ikuku na-etinye uche na nrụgide na-adịghị mma, nke na-erute nso iku ume nkịtị ma na-eme ka ọbụna ikuku na-ekesa na ngụgụ.
Iji mezuo nke a, ndị dọkịta kpọchiri ahụ́ onye ahụ, n’ime igbe osisi ma ọ bụ n’ọnụ ụlọ e mechiri nke ọma. Mgbe ahụ, a na-agbapụ ikuku site na ụlọ ahụ, a na-ebelata ikuku ikuku, a na-ekwekwa ka oghere onye ọrịa ahụ gbasaa ngwa ngwa. N’afọ 1928, ndị dọkịta rụpụtara obere ígwè a na-eji agagharị, ya na nfuli ndị e ji ígwè eletrik arụ.
Igwe a, nke a maara dị ka ngụgụ ígwè, ghọrọ ihe na-edozi ahụ n'ụlọ ọgwụ n'etiti afọ 20. Agbanyeghị, ọbụlagodi nrụgide nsogbu kachasị njọ na-egbochi njem onye ọrịa ma gbochie ohere ịnweta ndị ọrụ nọọsụ. Nke a mere ka ụlọ ọgwụ na-aga n'ihu na ventilashị nrụgide dị mma na 1960s.
Maka ikpe dị mfe, enwere ike ịme nke a na-abụghị nke invasively. A na-etinye ihe nkpuchi ihu na ọnụ na imi ma jupụta ikuku na-agbakwụnye nke na-abanye n'okporo ụzọ onye ọrịa. Mana ọnọdụ ndị siri ike karị chọrọ ngwaọrụ nke na-achịkwa usoro iku ume niile.
A na-etinye tube n'ime mgbapụta tracheostomy nke onye ọrịa ahụ n'ime akpa ume, na-eji usoro valves na manifolds iji mepụta sekit maka iku ume na ume, ihe ọtụtụ ndị na-emepụta ventilashị nke oge a na-ekwe ka sistemu kọmputa agbakwunyere na-enyocha ume onye ọrịa ma na-edozi ikuku iku ume. Ejighi ngwaọrụ ndị a dị ka usoro nlekọta, mana dị ka ihe ikpeazụ. Mgbapu a nke ikuku na-acho achoro ichikota siri ike, na ikuku ikuku ugboro ugboro nwere ike ime ka mmebi ume ogologo oge.
Ma na ọnọdụ ndị dị oke njọ ndị na-eme ikuku nwere ike ịpụta ọdịiche dị n'etiti ndụ na ọnwụ. Ihe omume ndị dịka mgbasa COVID-19 egosila na ha dị mkpa karịa ka anyị chere. Ebe ọ bụ na ụdị ndị dị ugbu a dị oke, dị oke ọnụ ma chọọ ọzụzụ sara mbara iji rụọ ọrụ, ọtụtụ ụlọ ọgwụ nwere obere ihe a na-enye, nke nwere ike zuru oke n'okpuru ọnọdụ nkịtị, mana na mberede ihe nchekwa a dị obere.
g mmanụ ọnwụ ọnwụ
Needswa chọrọ ndị ikuku ikuku na ọnụ ala na ngwa ngwa na ngwa ngwa na mgbasa nke teknụzụ na-azọpụta ndụ.
A na-ere ikuku CPAP maka ọrịre?
Dị ka nke September, 2017 naIgwe Micro-CPAPna-adịghị na ahịa ma. Dabere na onye nrụpụta ahụ, ha na-aga n'ihu na-arụ ọrụ nkwado nke FDA maka ngwaọrụ ha, yana nụchaa arụmọrụnkengwaọrụmicro-ihe ọkụ.June 14. 2021 g.
Inyere gị aka ibi ndu ahụike ụra na-emetụta ọtụtụ narị puku mmadụ. Ọ nwere ike bụrụ ajọ nsogbu ihi ụra ebe iku ume na-akwụsị ma na-amalite ugboro ugboro n'abalị niile, mana ugbu a st. Centlọ ọgwụ Vincent nwere ọgwụgwọ ọhụụ ọhụrụ a na-akpọ Inspire.
Margarethubbed a pulmonologist na St. Vincent, daalụ maka ịbata, daalụ yabụ na anyị niile ma ọ bụ ọtụtụ n’ime anyị maara CPAP nke ọma. Ọ bụ igwe ị na-etinye n'imi gị maka gị yabụ nke a bụ nhọrọ maka ndị nwere nsogbu ụra na-ehi ụra ma dị oke oke ee ee, yabụ na-akpali mmụọ bụ ihe eji agwọ ọrịa ụra a na-ehi ụra maka ndị nwere CPAP enweghị ndidi na anyị na-achọ ndị nwere oke oke na oke nsogbu ụra na-anwale CPAP ma 'ọ naghị arụ ọrụ ọ bụla ma nke ahụ pụtara atụmatụ nke oge ole ha anaghị eku ume n'abalị ma ọ bụrụ na ha na-eme ọmụmụ ụra, anyị ga-agụta ihe iku ume n'ebe ahụ n'oge na-adịghị anya ha ga-enwe nkezi nke 15 ka 65 ihe omume iku ume kwa awa na maka ndị na-eme nke a anaghị enweta ọgwụgwọ, ụdị nsogbu ndị ha nwere ike inwe n'ọdịnihu, nke ọma enwere ụdị nsogbu dị iche iche nke nsogbu obi, ọ dị njọ maka ọbara mgbali elu Ọrịa You maara ihe ọghọm nke nkụchi obi na ịkụ ala n'ahịrị na mgbe ahụ ndị mmadụ anaghị ehikarị ụra n'ehihie, ị naghị enwe ume mgbe ị tetara, nche ịmịhe ehihie gị adịghịzi ka ogo ikuku nke ndụ na-aga dow n nri anyi nile choro ihi ura ma anyi ziri ezi na ura a ihe omumu a na-ehi ura imegide gi nke oma achoro m igosi ihe ahu n’ihi na o di nma nke oma ee ee, etinyere ya n’ebe ahu o dikwa n’akuku nkeji iri na ise ya mere na o kariri nkeji iri na ise aka. obere batrị nke etinyere n’ime mgbidi obi, ọ dị ka pacemaker, mana pere mpe karịa pacemaker na ị sị batrị ahụ dị ihe dịka afọ iri na otu nke ziri ezi, yabụ ozugbo ọ bara n’ime ya ruo mgbe ha chọrọ ịbanye ebe ahụ ma eleghị anya mee mgbanwe, huh, mana ya? kwesịrị ịdị na-arụ ọrụ nke ọma maka oge ahụ, ị ​​na-enwetaghachi data a ka ị wee hụ ma ọ na-arụ ọrụ n'ezie, ka ị bụ naanị mmadụ na-eso ụzọ ọmụmụ ụra na-esochi ya ka anyị mee otu? ọtụtụ ihe dị iche iche, ozugbo etinyere ngwaọrụ anyị na-eme ọmụmụ ụra iji chọta ọmụmụ kachasị iji gwọọ ụra ụra ha nke ọma wee nwee ike soro nrube isi ha naanị site na ịmara mgbe ha gbanyere ya na mgbe ha na-agbanyeghị ya pụọ n'oké olu, emela onye na-esote aka nri ma eleghị anya ịkwụsị ịkwa ụja na ịmị nke ọma nke ọma jikọtara ya na apnea ka anyị gosi ndị mmadụ etu ngwaọrụ a si arụ ọrụ n'ihi na ọ dị iche na CPAP yeah mmhmm yeah na yabụ m chere na akụkụ nke ihe nkiri ahụ na-egosi anyị ihe na - eme na ụra ụra ebe ire nwere ike ịlaghachi ma mechie ụzọ ikuku ma ị ga - ahụ na onye ahụ nwere nsogbu iku ume mgbe ọ na - ehi ụra, yabụ a ga - etinye ngwaọrụ ahụ nke ọma ma emesịa ngwaọrụ ahụ ma ọ bụ ebe anyị na-aga, anyị na-aga nke ọma, yabụ batrị ahụ dị nke ọma n'okpuru mgbidi Igbe ahụ, mgbe ahụ ị nwere ụdọ nke na-abanye n'ime obi gị na nkedo nke na-aga akwara hypoglossal n'ọnụ gị yana ngwaọrụ ma ọ bụ electrode na obi gị na-achọpụta rụọ mgbe ị na-eku ume ma na-eziga mgbaàmà na electrode na ire gị iji mee ka ire gaa n'ihu ka ị na-ekpuchi iku ikuku iji gbochie mgbaàmà ndị ọzọ metụtara ya ma ọ bụ nsogbu ma ọ bụ mmetụta ndị metụtara ngwaọrụ ahụ ngwaọrụ ị maara na a ga-enwe obere ihe mgbu ozugbo ịkụ ahụ na echere m na ụfọdụ ndị nwere obere ahụ erughị ala na ire n'ihi na ire na-aga n'ihu, mana n'ozuzu ya ọfụma ọfụma na ịwa ahụ na-apụ apụ ee dị mma ee n'ihi na ị maara na m na-ekwu ndị a CPAPsinos enwetatụbeghị ma dịtụ mfe iji, mana ị ka nwere echiche ọhụrụ nke ikpe ziri ezi mgbe ị na-egosi mgbe niile na ọ sitere na mkpuchi ụlọ ọrụ mkpuchi ma ọ bụ na ọ dị mfe? na-emewanye na karia, iwu mkpuchi mkpuchi mkpuchi mkpuchi na-ekpuchi ya.
Ha maara na anyị na-atụ aro mgbe niile ịkpọ ụlọ ọrụ mkpuchi nke gị ma chọpụta ihe mkpuchi dị mma, yabụ na-enye ugbu a, ọ bụ nsu ma hụ na ị gwara dọkịta gị ka ị hụ ma nke a ọ bụ nhọrọ maka gị. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịmatakwu ụra a ụra na CPAP gị abụghị naanị. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịmatakwu banyere ngwaọrụ a, nweere onwe gị ịhọpụta iji hụ ma Inspire nwere ike ịrụ ọrụ maka gị nọmba 9 efu anọ anọ ise efu isii anọ na ise anọ anyị na-enweta ozi a niile amaara m na ọ nwere ike ghara ịhapụ gị nọmba ozi a maka jax comm ọ ga-adị n'okpuru ngalaba ahụike ma ọ bụrụ na ịchọrọ karịa ekele maka ọbịbịa ị na-ekele gị
SoClean ruru ego ahụ?
ỌtụtụSoCleanndị ọrụ kwetara na ha anọghị n'omume ihicha igwe ha dịka o kwesiri, naSoCleanbụ “uru ego ahụ”Ma na-enyere ha aka ugbu a ka ha na-erube isi n’iwu ha kwa ụbọchị. E nwere usoro ndị ọzọ ndị mmadụ nwere ike iji hichaa igwe.
Ndị na-egbu imi na-agbanwe ọdịdị imi?
Ihe AIRMAXgaadịghị emetụta ndịudinke gịimimgbe i jiri ya. Kedu ka AIRMAX siGọzie gị Dilatordị iche na ngwaahịa ndị ahịa ndị ọzọ dị?
Nri imi enwere ike ime imi pere mpe?
Kedu ihe ọ bụnwere ike ime?Meeburu ibuimi pere mpe, ewepụghịimipointier, ogologoimi mkpumkpu, obosaraimislimmer, bulbousimisharper na gbagọrọ agbagọ ma ọ bụ asymmetricalimikwekọọ. NaNose Clip nwere ikeka ejikwa ya droopyimiebuli n'ọnụ na ịgbatị humps ma ọ bụ bumps tinyeregọzie gịakwa.
Kedu ka m ga-esi meghee imi m mgbe m na-ehi ụra?
Ọ bụrụ na mmebi gị pere mpe ma mekwaa gị abalị, ịnwere ike ịnwale agọzie gịvalvụ dilator. Nke a bụ obere warara ị tinyere n'akụkụ gịimin'abalị tupu ị lakpuo ụra. Ọ na-adọta naemepenke gigọzie gịamaokwu. Ikwesiri iku ume nke ọma karie ma nwekwaa ume.Bọchị 2 2021
Ndị dọkịta na-akwado SoClean?
Yabụ, ịnwere ike ịnwụ ikuku nke nwere ọrịa nwere ike ime ka ị ghara ibute ọrịa na ngụgụ na ụzọ ikuku. Ọ bụ ya mere ọtụtụndị dọkịta na-atụ aroiji aSoClean2 CPAP Cleaner na igwe nhicha.Ọnwa Ise 12, 2020
SoClean dị egwu?
Ihe egwu: Iji ngwaọrụ a nwekwara ike ịmepụta isi na-adịghị mma n'ime akụrụngwa, mana nke a nwere ike ọ gaghị adịemerụ. Enweghi ekpughere ọkụ ọkụ UV ma ọ bụrụ na ihe egwu dị na nke a (dịka ọrịa kansa ma ọ bụ mmebi anya) adịghị mkpa. O di nwute, ọ na-ehicha elu ndị ekpughere ọkụ ozugbo.
Kedụ ka mgbanaka imi kwesịrị ibu?
Mmupo imi ahụ dị sentimita 0.39 na dayameta, na-eme ka ọ dịrị ha mfe iyi. . Nke a imi mgbanaka nwere adịchaghị ọlaọcha imecha na-mere si organic na elu-edu ihe. O nwere ezigbo akụkụ zuru oke nke na-eme ka ahụ dị mma ma dịkwa mma na ihu na imi.
Kedụ ụdị nchara eji eme mgbaaka imi?
A na-eme mgbaaka imi a site na igwe anaghị agba nchara dị elu maka ogologo oge. Ha dịkwa mma maka ma ndị nwoke ma ndị nwanyị. . Nke a set nke imi yiri mgbaaka na-mere si ịwa ahụ ígwè na atụmatụ a okpukpu abụọ helix Ọdịdị na a ogologo, l-ekara imewe na-eme ka ọ dị mma maka ihe nti.
Kedu ụdị imi imi ka na-adịkarị na Nepal?
Na ndịda Nepal ịkpọpu akụkụ septum ka bụ ihe a na-ahụkarị. Ọtụtụ ụmụ nwanyị ndị toro eto ka na-eji imi septum na aka mgba imi chọọ imi mma. Ọtụtụ ụmụ nwanyị nwere ọgbụgba imi ọla edo iji gosipụta mmekọrịta mmadụ na ibe ha, nke agbụrụ, na nke okpukpe na ọha mmadụ. Na Central Australia, ịmịpu akụkụ imi bụ isi maka mmepe nwa nwoke na nwoke.